नेपाल आज | पृथ्वीजयन्ती भव्यः सर्वसाधारण भन्छन् ‘देश बनाउनेको नाममा किन बिदा छैन ?’ (भिडियाेसहित)
पृथ्वीजयन्ती भव्यः सर्वसाधारण भन्छन् ‘देश बनाउनेको नाममा किन बिदा छैन ?’ (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । पुष २७ गते अर्थात् पृथ्वी जयन्तीको दिन सिंहदरबारअगाडिको पृथ्वी शालिकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा तथा सर्वसाधरणको उपस्थितीमा पृथ्वी जयन्ती मनाइयो । समारोहमा पुगेका सर्व साधारणले राज्यले पृथ्वीनारायण शाहको उचित सम्मान नगरेको गुनासो पोखेका छन् ।
चन्द्रागिरिका लक्ष्मण सिं खड्काले पशुपतिनाथ र बौद्धनाथ पछि पृथ्वीनारायण शाह तेस्रो बोल्ने देवता भएको बताए । केही सुविधा नहुँदा नेपाल एकिकरण गरेको उनको यो महान् कार्यलाई राज्यले खुलेर सम्मन गर्न चुकेको र ‘तँ रोएजस्तो गर म कुटेजस्तो गर्छु’ भनेजस्तो भएको बताए ।
अर्का सर्वसाधारण माधवप्रसाद घिमिरेले घुस खाने दिने, लिने र विदेशी महाजनले देशलाई कंगाल बनाएको आरोप लगाए । एकदलीय र बहुदलीय सबै व्यवस्थाले राजालाई दोष लगाएको र यसको परिणाम अहिलेको अवस्था रहको बताए । नेपालीले अझै नराम्रो दिन भोग्नुपर्नेबारे उनले गुनाशो पोखे । जताततै भइरहेको भ्रष्टाचार भइरहेको अवस्थाप्रति दुःख व्यक्त गरे । राजालाई पूर्नस्थापना गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
विद्यार्थी वासुदेव पोखरेल आजको दिनमा पृथ्वी नारायण शाहलाई राष्ट्रिय एकता गर्ने योद्धाको रुपमा सम्झन चाहन्छन् । राज्यले सम्मान गरेजस्तो नलागेको र एकीकरणको दिन पनि सार्वजनिक विदा नदिएको कारण राज्यले के उनलाई बिर्सिएकै हो त ? भन्नेबारे उनले प्रश्न उठाए ।
अर्का विद्यार्थी प्रकाश न्यौपानेले शाहलाई सिंगो देश एकिकरण गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गरे र नेपाल अझै पनि एकीकरणकै अभ्यासमा भएको बताए ।
सर्वसाधारण सुभाष सिटौलाले पृथ्वीनारायण शाहको योगदानले गर्दा नै आज हामी आत्मनिर्भर भएर खडा भएको हुँदा आजको दिन सार्वजनिक बिदा दिएकै उचित भएको बताए । उनले भने, ‘जसले यो मुलुक यत्रो बनायो, त्यसलाई सम्झिनका लागि एकदिन विदा दिँदा के फरक पर्छ र ? उहाँलाई प्रत्येक नेपालीले गौरव गर्नुपर्छ ।’
शिव सेनाका अध्यक्ष अनिल बस्नेतले राष्ट्र निर्मातालाई सम्मान नगर्ने सरकार नेपाल, कुसरकार कहलिन लागको बताए । विश्वमा चिनिने काम पृथ्वीनारायण शाहले गर्दा भएको कारण उनलाई सबैले हृदयबाट मनन गर्नुपर्ने उनले बताए । शिव सेनाले निरन्तर हिन्दू राज्यलाई प्राथामिकता दिँदै राजसंस्था फर्काउने अभियानमा निरन्तर लागि रहेको पनि उनले जानकार गराए ।